Warbixin: Habeenkii saddexaad ee Shirweynaha Jamhuuriga
Shirweynihii xisbiga Jamhuuriga ayaa galay xalay habeenkii 3-aad. Khudbadaha xubnaha ay jeedinayeen ayaa u badnaa kuwa la sii duubay, maaddama sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore, oo dadka isku imaanaya la yareeyay, Covid-19 dartii.
Xubnihii shirka ka hadlay waxa ka mid ahaa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence oo si weyn u dhaliilay siyaasadda xisbiga Dimuqraaddiga. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintani indhaha ku hayay warbixintan ayuuna nooga diyaariyay.
Warbixin: Habeenkii 3-aad ee Shirweynaha Jamhuuriga
Haddaba, markii uu shirkaasi dhammaaday xalay xilliga Mareykanka, ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray Feysal Derri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, degganna gobolka Minnisota. Waxa uu weydiiyay fariimihii ugu weynaa ee uu shirkii xalay xambaarsanaa.
Falanqeyn: Shirweynaha Jamhuuriga